I-Tryton 5.6 ngentuthuko kumamojula, ukuthekelisa, isikhombimsebenzisi sewebhu nokuningi | Kusuka kuLinux
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule kumenyezelwe ukukhishwa kwenguqulo entsha yeTryton 5.6, lapho kuthuthukiswe okuhlukahlukene kumamojula phakathi kwezinye izinto. Kulabo abangamjwayele uTryton kufanele bakwazi lokho is software edidiyelwe yokuphatha (owaziwa nangokuthi i-PGI noma i-ERP) yi- ipulatifomu ejwayelekile yekhompyutha ephezulu yamazinga amathathu kanye nenhloso ejwayelekile lapho isixazululo sebhizinisi (ERP) sakhiwa khona ngamamojula we-Tryton.
Isiteji se I-Tryton ihlelwe ngokwakhiwa kwezingqimba ezintathu, ahlanganiswe kanje:
Ideskithophu - Iklayenti leTryton
Iwebhu - Iseva yeTryton
Iskripthi - Idatabase elingaba yiPostgreSQL noma i-SQLite ikakhulukazi.
Lolu hlelo lokusebenza luza neqoqo lamamojula angaphezu kwekhulu ahlanganisa izidingo eziningi zebhizinisi (ukuthenga, ukuthengisa, ukubalwa kwezimali, isitoko, njll.).
UTryton usingatha okulandelayo ngendlela ye-modular:
Ukubalwa kwezimali nokubalwa kwezimali
Ukuphathwa kwamaphrojekthi nesikhathi
1 Yini okusha eTryton 5.6?
2 Ungayifaka kanjani iTryton 5.6 kuLinux?
Yini okusha eTryton 5.6?
Kule nguqulo entsha, kwenziwe ngcono okuhlukahlukene kumamojula wohlelo lokusebenza, kanye namasha.
Kulabo asebevele bekhona, Kuqokonyiswa ukuthi ekuthengweni, ekuthengiseni nakwifomu lesithathu, kungeziwe 'izinkinobho zokuxhumanisa, lezi zinkinobho zikhombisa inani lamarekhodi axhumene nawo futhi zivule ukubuka kuwo.
Ngesikhathi soshintsho kumamojula wokuthenga, wokuthengisa nokukhiqiza, ukuzeisikhathi kungenzeka ugcine igama lesisebenzi esibhekene nalezi zinguquko zesimo (isilinganiso, isiqinisekiso, ukuqala komkhiqizo, njll.), Lokhu kusiza ukukhomba umphathi esimweni senkinga.
Ngesikhathi amamojula amasha afakiwe kube alandelayo:
Ukuqoqwa kwemali: amazwe amaningi aseYurophu abeka ukuqoqwa kwemali yokugcina ibe ngamasenti amahlanu, le module ivumela ukuchazwa ngemali ukuqoqwa okuzokwenziwa ngamanani wokugcina, ama-invoyisi okuthengisa namakhasimende anenani eliphelele elihlanganisiwe uma inketho ingukuthi kusebenze: ama-invoyisi wokuthenga nawokuhlinzeka angalungiswa ngokuya ngamacala.
Ukukhiqizwa kwezinto zokuthengisa: le module igcwalisa uchungechunge lwezinto ezithengiswayo, ivumela ukwenza kusebenze i-oda lokukhiqiza kulayini ngamunye womkhiqizo othengisiwe; Ngakho-ke, umkhiqizo uzoxhunyaniswa nokuthengiswa okuthile hhayi ukuqoqwa.
Olunye ushintsho olusetshenziswe kule nguqulo entsha luku ukuthekelisa i-CSV, kukho ukusebenza okusha kungeziwe lokho ivumela ukuthekelisa kwawo wonke amarekhodi abhalwe ohlwini kungenzeka futhi ukuthola i-URL ephephile exhunywe nokuthekelisa.
Ohlwini lweklayenti lewebhu manje sekukhona ukuskrola okungapheli, iklayenti lilayisha ngokuzenzakalela ibhulokhi elilandelayo lamarekhodi ngakho-ke akusadingeki ukuthi lichofoze inkinobho ethi "Okuningi".
Kube khona okuningi ukuthuthukiswa kokubalwa kwentengo yezindleko, umsebenzi othomathikhi ubala kabusha inani lezindleko zento uma kudingeka.
UTryton manje usengasebenzisa i-WeasyPrint (uma ikhona) yokuguqula imibiko ngefomethi ye-HTML iye PDF, i-Weasyprint inikeza ukunikezwa okungcono kuleli cala kuneLibreOffice, okuyithuluzi elizenzakalelayo.
Ngaphezu kwalokho, izinkokhelo ze-Stripe manje sezingabuyiselwa ngokugcwele noma ngokwengxenye kusuka kusixhumi esibonakalayo seTryton, lokhu kugwema ukunikeza abasebenzi abaningi ukufinyelela kwiphaneli ye-Stripe.
Ekugcineni, Uma ufuna ukwazi kabanzi ngemininingwane yalokhu kukhishwa okusha, ungabheka uhlu oluphelele lwezinguquko Kulesi sixhumanisi esilandelayo.
Ungayifaka kanjani iTryton 5.6 kuLinux?
Uhlelo lokusebenza Kutholakala ngaphakathi kwamakhosombe wokusabalalisa okuningi kwe-LinuxYize imininingwane kuphela ukuthi akusilo lonke uhlelo lokusebenza oluye lwabuyekezelwa enguqulweni yakamuva.
Uma ufuna ukwenza inqubo yokufaka, ungasebenzisa isikhungo sakho sesoftware ukucinga uhlelo lokusebenza.
Ungavakashela i- isixhumanisi esilandelayo lapho ungathola khona imibhalo namakhasimende ezinye izinhlelo ezisebenzayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Tryton 5.6 ngentuthuko kumamojula, ukuthekelisa, isikhombimsebenzisi sewebhu nokuningi
Ubuntu Touch OTA-12 ifika ngokusemthethweni "njengesibuyekezo esikhulu kunazo zonke ezake zakhishwa"